Mmalite N'ogbe - Hangzhou Savgood Teknụzụ Nrụpụta & Onye na-ebubata ya
Igwefoto thermal EO/IR
Igwefoto PTZ bi-spectrum
Igwefoto PTZ dị ogologo
Igwefoto PTZ etiti dị anya
Igwefoto Dome PTZ
1280×1024 PTZ Igwefoto
Igwefoto PTZ 640×512
Igwefoto PTZ 384×288
Okporo ụzọ ọgụgụ isi
Ụlọ ọgụgụ isi
Nchekwa oke ala
-- Ihe a na-ahụ anya na nke na-ekpo ọkụ na-eweta ngwọta
Teknụzụ Hangzhou Savgood hiwere na Mee, 2013. Anyị na-agba mbọ ịnye ihe ngwọta CCTV ọkachamara.
Ndị otu Savgood nwere ahụmịhe afọ 13 na nchekwa & ụlọ ọrụ onyunyo, site na ngwaike gaa na ngwanrọ, site na analog gaa na netwọkụ, site na anya na thermal, site na modul igwefoto na ntinye.Ndị otu Savgood nwekwara ahụmịhe afọ 13 na ahịa azụmaahịa mba ofesi, ndị ahịa si mba na mpaghara dị iche iche.
Otu ụdịdị dị iche iche onyunyo nwere ntụpọ ọmụmụ na ọnọdụ dị iche iche ma ọ bụ ihu igwe dị iche iche.Iji chekwaa awa 24 na ihu igwe niile, Savgood họrọ igwefoto bi-spectrum, yana modul a na-ahụ anya, IR na modul igwefoto ọkụ LWIR na ya.
Enwere ụdị dị iche iche maka igwefoto Savgood bi-spectrum, Bullet, Dome, PTZ Dome, Position PTZ, PTZ dị elu dị arọ.Ha kpuchiri nleba anya n'ebe dị anya, site n'ebe dị anya (ụgbọ ala 409 na nchọpụta mmadụ 103) igwefoto EOIR IP nkịtị, na igwefoto PTZ bi-spectrum dị ogologo (ihe ruru ụgbọ 38.3km na nchọpụta mmadụ 12.5km).
Modul a na-ahụ anya nwere arụmọrụ ruo 2MP 80x mbugharị anya (15 ~ 1200mm) na 4MP 88x mbugharị anya (10.5 ~ 920mm).Ha nwere ike ịkwado nke anyị ngwa ngwa & ziri ezi magburu onwe Auto Focus algọridim, Defog na IVS (Intelligent Video onyunyo) ọrụ, Onvif protocol, HTTP API maka nhazi usoro nke atọ.
Thermal modul nwere arụmọrụ ruo 12um 1280 * 1024 isi na 37.5 ~ 300mm moto lens.Ha nwekwara ike ịkwado ngwa ngwa & ziri ezi magburu onwe ya Auto Focus algọridim, IVS (Intelligent Video Surveillance) ọrụ, Onvif protocol, HTTP API maka ntinye usoro nke atọ.
Ugbu a niile nke ese foto na ụdị igwefoto na-eresị ọtụtụ esenidụt mba, United States, Canada, Britain, Germany, Israel, Turkey, India, South Korea wdg Ha na-na ọtụtụ-eji na CCTV ngwaahịa, Military ngwaọrụ, Medical equipments, Industrial akụrụngwa. , Ngwá ọrụ robot wdg.
Na dabere na modul igwefoto mbugharị a na-ahụ anya na modul igwefoto ọkụ, anyị nwekwara ike ịrụ ọrụ OEM & ODM dabere na ihe ị chọrọ.
Nọmba 406 Xintiandi Street, Gongshu District, Hangzhou City, 310004, China